NGABA IMEYILE ITHUNYELWE NGE-MLK DAY 2021? NGABA IPOSI IVULIWE? - IINDABA
Ngaba imeyile ithunyelwe nge-MLK Day 2021? Ngaba iPosi ivuliwe?
UMartin Luther King Jr. Day uyaphawulwa ngale yr ngoMvulo, nge-18 kaJanuwari 2021. Ukuhlonipha umhla wokuzalwa kukaMartin Luther King Jr, owela nge-15 kuJanuwari, i-United States yamkela uMvulo njengeholide yomanyano. Oku kuthetha ukuba iinkampani ezininzi zivaliwe ukunika abasebenzi ixesha lokuphumla kunye nempelaveki edlulileyo.
Kwiholide, amathuba okuba ubuze ukuba kunokwenzeka ukuba uthumele okanye ufumane iposi nge-USPS. Ngomhla kaMartin Luther King Jr., i-United States Postal Service ivaliwe kwaye iposi ayizukuhanjiswa. IiPosi ziyavulwa kwakhona kwaye ukuhanjiswa kweposi kuyaqala kwakhona ngenkonzo rhoqo ngoLwesibini, nge-19 kaJanuwari.
don lemon utshatile u-stephanie ortiz umtshato
Usuku lukaMartin Luther King Jr. lu-1 kwe-10 leeholide zeSithili
Abasebenzi beeNkonzo zePosi zaseUnited States banikwa usuku lokuphumla oluhlawulelwayo kugcinwa iiholide ezilishumi zelizwe. Ukongeza kuMartin Luther King Jr. Day ngoJanuwari 18, iiholide ezahlukileyo apho indawo yokusebenzela ivaliwe ngo-2021 lusuku lonyaka omtsha (nge-1 kaJanuwari), uSuku loMongameli (ngoFebruwari 15), uSuku lweSikhumbuzo (ngoMeyi 31), i-Independence Usuku (ngoJulayi 5, ngokugcina iholide kaJulayi 4), uSuku lwaBasebenzi (ngoSeptemba 6), uSuku lweColumbus (ngo-Okthobha 11), uSuku lwamaVeterans (ngoNovemba 11), uSuku lokuBonga (ngoNovemba 25), kunye nosuku lweKrisimesi (ngoDisemba 25).
Ngomhla kaMartin Luther King Jr. Day, uya kuba nakho ukuthembela kwiinkampani ezahlukeneyo eza kuvalwa, kunye neefakhalthi, iibhanki, iNew York Stock Exchange kunye neNasdaq, kunye nenkunkuma. Isixeko, isiphaluka, ilizwe, kunye nabasemagunyeni indawo ekusebenzela kulindeleke ukuba zivaliwe kugcinwa usuku.
UKUYA Ukushicilelwa kwe-USPS eSacramento, eCalifornia uyacacisa, Ekuqwalaseleni uGqirha uMartin Luther King Jr. weholide yosuku, iinkonzo zePosi ziya kuvalwa kwintengiselwano ngoMvulo, nge-18 kaJanuwari, ngo-2021. Akunakubakho zindawo zokuhlala okanye zeshishini. Nangona kungasayi kubakho nkonzo i-imeyile eqhelekileyo, i-Priority Mail Express ihanjiswa iinyanga ezilishumi elinambini ngonyaka kwaye iya kuhanjiswa ngoJanuwari 18. Ukubonelelwa okuqhelekileyo kunye neeshedyuli zokuhanjiswa kuya kuqhubeka ngoLwesibini, nge-19 kaJanuwari 2021.
Ngelixa i-USPS ivaliwe, i-FedEx kunye ne-UPS zenza ukuhanjiswa ngoSuku lwe-MLK
I-FedEx ’s ishedyuli yeholide ibonisa ukuba iOfisi yeFedEx, ukuhanjiswa kwekhaya, ukuhanjiswa kwempahla, iOfisi, iiNethiwekhi eziCwangcisiweyo, kunye neeNethiwekhi zorhwebo zisebenza kwishedyuli esemgangathweni kwikhefu. I-FedEx's Express kunye ne-SensiblePost isebenza kwishedyuli eguqulweyo.
IiUPS's ishedyuli yeholide ithi, ngoMartin Luther King Jr. Day, i-UPS® iveni kunye nababoneleli beenkonzo banokufumaneka. Qaphela ukuba ukuhanjiswa kwe-UPS i-SurePost® kunye ne-UPS Mail Innovations® kuya kufuna ixesha losuku olunye lokuhamba ngenxa yeholide yeFederal (USPS). Iindawo zabathengisi beUPS ziya kuba zivulekile kwaye abanikezeli bemithwalo ye-UPS banokufunyanwa.
ixesha elilungileyo logqirha 4 isiqendu 11
Ngoku ka Kwikhozi , iholide imelwe ukuba ibe ngumhla osemthethweni wenkonzo kwaye ibhiyozela ubomi bamakhosi obomi kunye nelifa. Bonke abantu baseMelika baphefumlelwe ukuba basebenzise ixesha lokungabikho emsebenzini ukuya kuba ngamavolontiya ngaphakathi kwabahlali. Ngobhubhane we-COVID-19 oqhubekayo, thathela ingqalelo ukuvolontiya okanye ukunikela ngokubanakho kwidijithali. Ukuba uvolontiya lomntu othile, qiniseka ukuba umgama wentlalontle kwaye ubeke i-facemask ukuze uhlale kude nokuvela kwe-coronavirus.
Ikamva uMartin Luther King Jr.Ukuqwalaselwa kwemini kuwela kwezi ntsuku zilandelayo:
-2022: NgoMvulo, nge-17 kaJanuwari
-2023: NgoMvulo, nge-16 kaJanuwari
-2024: NgoMvulo, nge-15 kaJanuwari
-2025: NgoMvulo, nge-20 kaJanuwari
-2026: NgoMvulo, nge-19 kaJanuwari
Aaron ghost adventures ukunciphisa umzimba
Ingxelo kaJohn lennon yesidumbu
Megan blake irwin ubudala
yayiziswa phi ifotwa